အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: နှင်းလွှာခြုံသည့် မြောက်ဦးမြို့မနက်ခင်း
16 Responses to “နှင်းလွှာခြုံသည့် မြောက်ဦးမြို့မနက်ခင်း”
သမိုင်းလဲသိရ ဓါတ်ပုံလဲ ကြည့်ရဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်သွားတဲ့အခါ အရမ်းအထောက်အကူဖြစ်သွားပြီ။ ပြီးတော့ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရင်း ကိုယ့်မြေပေါ်မှာ ဒီလောက်လှပတဲ့ နေရာတွေ ရှိနေပါလားဆိုပြီး ဂုဏ်ယူမိတယ်။ မြောက်ဦးကို တစ်ခေါက်မှ မရောက်ဖူးဘူး။ စိမ်းလန်းစိုပြေနေတဲ့ တောတောင်တွေနဲ့ စေတီပုထိုးတွေနဲ့။ ပုဂံထက်တောင် ပိုလှနေသလိုဘဲ။ ဒါပေမဲ့ အလှတစ်မျိုးစီပေါ့လေ။ နိုင်ငံခြားသားတွေ သေချာပေါက် မျက်စိတွေ့မဲ့ နေရာမျိုး။ နေထွက်နေ၀င်လဲ ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့။
လှလိုက်တဲ့ ရှု့ခင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ မချော ရေ ..
သွားချင်စရာ ...း))
နေမထွက်ခင် နှင်းမြူတွေကြားက ပုံရိပ်များ
သွားချင်တဲ့နေရာထဲမှာ ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦးလည်း ပါတယ်.။ ဘုရားတွေနဲ့ သဘာဝရှုခင်းအလှတွေက တကယ့်ကို သက်ဝင်တဲ့ ပန်းချီကားကြီးတစ်ချပ်လိုပဲ.။ အဲဒီကမှ မချောရဲ့ လက်ရာလေးကြောင့် ပိုအသက်ဝင်သွားပြီ..........
နေရာဒေသတွေရဲ့ လှပမှုကလဲ ရင်သပ်ရှုမောစရာ..
မြောက်ဦးဟာ ပုံဂံထက်တောင် အပုံကြီးလှမယ်ထင်တာပဲ
ဒါပေသိ ဘုရားပုထိုးတွေ စည်ပင်ပြန့်ပွားတာချင်းကတော့
သိပ်သွားချင်တာပဲ မရယ်...မ ပြောပြလို့ အရင်ပို့စ်တွေကစလို့ မြောက်ဦးရဲ့ သမိုင်းတွေကိုလဲ
စုံစုံလင်လင် မျှဝေပေးတာ မ ကို ကျေးဇူးကုဋေကဋာ
ပါရှင်....ခရီးများများသွားဖြစ်တဲ့ မ ကိုအရမ်းပဲ
OMG..breathtaking and awesome scenery photos..
မြောက်ဦး မြို့ ပုံလေးတွေ
ပုံလေးတွေ အရမ်းလှတယ်...မချောရေ...တစ်နေ့ တော့ရောက်အောင်သွားပါဦးမယ်....
အွန်လိုင်းကနေ ပုံလေးတွေကို အားကျပြီး မြောက်ဦးကို အရောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ ချောရဲ့ စာတွေနဲ့အတူ ပုံလေးတွေကို မြင်ပြီးတဲ့အခါ တီတင့်လည်း တစ်နေ့တော့ မြောက်ဦးကိုအရောက်သွားဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး)
ဟာ ဒေါ်ချော ခရီးသွားသည်ပဲ...မြောက်ဦးကို သွားမယ်သွားမယ်နဲ့ စိတ်ကူးဖဲရိုက်နေမိတာ ကြာပေါ့...အလုပ်ကလည်းများ ကိုယ့်ဒေသနဲ့ကလည်း လှမ်း...သည်ကြားထဲမှာ အသားကလည်း မည်းမည်းဆိုတော့ ဘင်္ဂါလီနဲ့မှားပြီး သမခံရမှာလည်း ခပ်ကြောက်ကြောက်ဆိုတော့ ချီတုံချတုံဖြစ်နေတာ...
လောလောဆယ်တော့ ပုံတွေ အရင်ကြည့်သွားပါသဗျား...
Your photos are so good !Thanks for sharing.
ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ ပုံတွေကို အချိန်ယူပြီး ကြည့်ရတယ် ချောရေ ... ။
ဓာတ်ပုံတွေက တကယ့်ကို အံ့မခန်းပဲ ... ချက်ချင်း အပြေးသွားချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်။ ပို့စ်တခု ဖြစ်ဖို့ရာ ချောရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ ... ။
ဟေုသုတရသလို ပုံတွေကလည်း အရမ်းကောင်းတယ် ချောရေ..
ပြန်လာရင် ဆောင်းပါးတွေ ပြန်ရေးပေးပါ...
တို့တွေက ချောရဲ့ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေဖတ်ပြီး နေရာမရွေ့စရိတ်မကုန်ပဲ ခရီးထွက်ဖြစ်သွားတယ်.. :)
ခရီးသွားရာသီ ဆိုတော့ အခြားရောက်ဖူးတဲ့နေရာလေးတွေရှိယင် မြန်မြန်လေး မျှဝေပေးပါဦးနော် ကျေးဇူးပါ့့